पद जाेगाउन काठमाडौ अाएकाे हाेइन : मन्त्री स्थापित| Nepal Pati
आफूसँग अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री केशव स्थापितलाई हटाउने तयारीमा लागेका छन् । त्यही तयारीमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी सकेका छन् । मन्त्री स्थापित पनि काठमाडौंमा छन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाएनन । खास विवाद के हो ? मन्त्री स्थापितसँग गरिएको छोटो कुराकानी
तपाई कहाँ हुनुहुन्छ ?
म अहिले काठमाडौमा छु ।
मुख्य मन्त्रीले हटाउने भएपछि पद जोगाउन काठमाडौं आउनु भएको हो ?
म कामका सिलसिलामा काठमाडौं आएको हुँ । चाइना जाने तयारीमा रहेकाले त्यसको सिलसिलामा पनि काठमाडौमा छु । मलाई हटाउने योजना पनि छैन । म पद जोगाउन आएको पनि होइन ।
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्नु भएको थियो । तर पाउनु भएन भन्ने छ नी साँचो हो ?
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न भेटन खोजेको साँचो हो । तर चिकित्सकहरुले तत्काल नभेट्न सल्लाह दिएकाले म नभेटी फर्किएको हुँ ।
तर मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलले तपाईलाई हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सल्लाह गर्नु भएछ नी त ?
त्यो मलाई जानकारी छैन ।
खास तपाईले मन्त्रिपरिषद बैठकमा नै गाली चै किन गरेको ?
गाली गरेको होइन । मुख्यमन्त्रीले कामका विषयमा चाँसो राख्नु भएको हो । मैले त्यसको जवाफ फर्काएको हुँ । जवाफ दिने क्रममा सामान्य सवाल जवाफ हुँदा अलि चर्को बोलेको हुँ । मेरो ठूलो स्वरमा बोल्ने बानी छ । त्यसलाई जोडेर मन्त्रीलाई मुखमुखै लाग्यो । भनाभन भयो भन्ने हल्ला फैलाइएको हो । मन्त्रिपरिषद बैठक चलिरहेको समयमा होइन । मन्त्रिपरिषद बैठक सकिएको अवस्थामा सामान्य विवाद भएको हो ।
खास तपाईले काम गर्न नसकेको नै हो त ?
काम गर्न नसकेको भन्दा पनि काम नभएको हो । मेरो काम बजेट खर्च गर्नेर त्यस अनुसार यति गरे भनेर देखाउने गरिको होइन । मेरो काम त बाटो बनाउने हो । त्यसको लागि रिपोर्ट बनाउनु पर्यो । टेन्डर आह्वान गर्नुप¥यो । त्यसको मूल्यांकन गर्नुप¥यो । म त्यसको प्रक्रियामा लागिरहेको छु । तिहारपछि धेरै काम सुरु हुन गइरहेका छन् । खसीबाख्रा किनेर वितरण गरेजस्तो नभएकाले देखिन नसकेको हो ।
अब तपाईलाई मुख्यमन्त्रीले हटाउनु भयो भने के गर्नुहुन्छ ?
त्यो हल्ला मात्रै हो । मुख्यमन्त्रीले त्यस्तो गर्नुहुन्न । म उहाँलाई चिन्छु । बिहान कुरा भइसकेको थियो । बैठकपछि पनि उहाँले ‘जिरो पर्पmर्मेन्स’को कुरा गर्नु भएकाले मलाई रिष उठ्यो । ठूलो स्वरमा जवाफ फर्काएको हुँ । म १८ घन्टा काममा लागेको छु तर काम गर्दा गर्दै पनि तैले काम नै गरिनस भनेकाले म माथि शंका नगर्नुहोस् भनेर जवाफ फर्काएको हुँ । विवाद यति मात्रै हो । जहाँसम्म हटाउने कुरा छ । यही कुरा लिएर उहाँ हिँड्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । उहाँजस्तो भद्र मान्छले त्यस्तो गर्नुहुन्न ।